China Best Price SC (B) 10 akọrọ-ụdị transformer na teknuzu parameters Supplier-shengte emepụta na suppliers |Shengte
Best Price SC(B) 10 akọrọ ụdị mgbanwe na teknuzu paramita Supplier-shengte
Ọnwụ dị ala, mwepu akụkụ dị ala, obere mkpọtụ, mkpofu ọkụ siri ike, ọrụ 120% gosipụtara ọrụ dị n'okpuru ọnọdụ mmanye ikuku jụrụ oyi.
Ọmarịcha ọrụ mgbochi mmiri.Ọ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'okpuru 100% iru mmiri.Enwere ike itinye ya n'ọrụ n'ebughị ụzọ ihicha ma emechie ya.
Ọrụ nchekwa, enweghị ọkụ na ọkụ ọkụ, enweghị mmetọ, nwere ike itinye ya ozugbo na ebe ibu.
Ejiri ya na usoro njikwa okpomọkụ zuru oke iji nye nkwa a pụrụ ịdabere na ya maka ọrụ nchekwa nke ndị na-agbanwe agbanwe.
Nrụzi na-adịghị, nrụnye dị mfe, ọnụ ahịa ọrụ zuru oke dị ala.
Elu ntụkwasị obi.Dị ka nchọpụta banyere ọrụ nke ngwaahịa ndị etinyere n'ọrụ, ntụkwasị obi nke ngwaahịa ahụ eruola ọkwa dị elu nke mba ụwa.
Epoxy resin cast SC (B) 10, SC (B) 11-50 ~ 2500 usoro resin mkpuchi ọkụ akọrọ, dabara maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ elu, ebe azụmahịa, ebe obibi, ebe egwuregwu, osisi petrochemical, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ oloko, wdg.
1. Low mkpọtụ: ezi uche magnetik sekit imewe na nhọrọ nke elu-edu gbakwasa oyi akpọrepu silicon ígwè mpempe akwụkwọ, full oblique anọ onuete nzọụkwụ lamination, pụrụ iche draft Mbelata mgbakọ usoro, otú mkpọtụ larịị bụ ala karịa mba ọkọlọtọ.
2. Mwepu mpaghara: eriri igwe na-anabata teknụzụ nkedo kacha ọhụrụ nke mba ụwa, nke mere na a na-awụsa resin n'okpuru agụụ na nrụgide.Mwepu mpaghara dị ntakịrị, nke nwere ike hụ na ọrụ nchekwa dị ogologo oge n'okpuru voltaji na-arụ ọrụ.
3. Ike siri ike iguzogide mberede mkpụmkpụ mkpirisi: eriri igwe eji maka mbukota Ọdịdị nke epoxy iko fibers, agụụ wụsara winding n'ígwé, tụgharịa-na-atụgharị n'ime resin, mgbe ọgwụgwọ, eriri igwe na-etolite a elu ike nke isiike ahu, na iji efere Ọdịdị na ngọngọ n'ọnọdu ụzọ elu na ala, iji hụ na transformer n'ibu ike nke dum, na-eme ka ngwaahịa nwere elu mkpụmkpụ sekit ike.
4. Ike mmetụta eguzogide: pụrụ iche segmental okirikiri Ọdịdị na foil Ọdịdị na-nakweere na agbapụtara otu, nke nwere ike ibelata voltaji n'etiti n'ígwé, melite eletriki nkesa, na-enwe ike ọkụ mmetụta iguzogide.
SC(B) 10akọrọ igwe ngbanwe teknụzụ
Nlereanya uk% Ọnwụ ikuku (w) Mfu (120C) (W) 0.1 LPA (AN) DB Ogo mm Ngụkọta (kg) Obere voltaji ọnụ
Nka na ụzụ paramita S (B) H15-M-30 ~ 1600/10/0.4 usoro amorphous alloy nkesa transformers
Nke gara aga: Ọnụ ahịa kacha mma DFW-12 Cable Branch Box Supplier-shengte
Osote: akọrọ-ụdị transformer